Madaafiic khasaare nafeed sababay oo xalay lagu soo tuuray Buulo Xuubey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com- Madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac oo aan aan la ogeyn halka laga soo tuuray ayaa xalay ku soo dhacay xaafado ka tirsan degmada Wadajir, kaasoo sababay dhaawacyo soo gaaray dad rayid ah.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr madfac xalay abaarihii 12-kii habeenimo ee saq dhexe ku soo dhaceen xaafadaha Korontada iyo Danwadaag.
Mid ka mid ah ehelada dad ay dhaawac ka soo gaareen madaafiicdii xalay ayaa sheegay in labo madfac uu ku soo dhacay gurigeeda, isla markaana labo ka mid ah eheladiisa ay ku dhaawacmeen.
“Hal madfac ayaa gurigeena ku soo dhacay, mid kalena agteena ku dhacay, nin adeerkee ah iyo wiil walaalkee ah ayaa ku dhaawacmay”ayuu yiri ninkan oo aan magaciisa sheegin.
Inta la og yahay todobo ruux ayaa ku dhaawacantay madaafiicda, kuwaasoo labo ka mid ah ay ugu geeriyoodeen isbitaalka Madiina, waxaana xaalad koomo ah ku jira labo ka mid ah dhaawacyada shanta ruux ee ku jira Isbitaalka.
Dadka ku dhaqan degmada Wadajir ayaa xalay soo deristay wal wal iyo cabsi ku aadanaa madaafiicdii xalay ku soo dhacday qeybo ka mid ah xaafadaha.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Maamulka degmada Wadajir oo ku aadan madaafiicda xalay ku soo dhacday qeybo ka mid ah xaafadaha degmadaas.
Hogaamiyaha Alqaacidda oo ku dhawaaqay garab cusub oo ka dagaalama Asia